Instagram မှာ Follower အမြောက်အများ မထင်မှတ်ဘဲ ဆုံးရှုံးခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရပါသလား။?
ဒီနောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့လည်းအခက်အခဲရှိနေတယ် ? ကောင်းပြီ, ငါတို့နဲ့အတူတူပဲ။. ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့ follower တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ကျွန်တော်လုပ်သမျှ အရာအားလုံးကြားက Instagram မှာ Follower တွေ ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးရလဲဆိုတာ မကြာခဏ တွေးမိပါတယ်။.
ထိုမျှသာမက, ပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နိဂုံးကိုငါရောက်ခဲ့တယ်. ဒါကြောင့်, ဤဆောင်းပါး၌, သင့် Instagram Follower ဆုံးရှုံးရသည့် အကြောင်းရင်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပါမည်။.
ငါဘာကြောင့် Instagram followers တွေဆုံးရှုံးရတာလဲ?
နောက်လိုက်များဆုံးရှုံးခြင်းသည် Instagram အတွေ့အကြုံ၏သဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ Instagram အကောင့်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. လူတိုင်းသည် သင့်ပစ္စည်းကို အမြဲတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။, အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နောက်ဆက်တွဲနှင့် မလိုက်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။, ပြီးတော့ တခြားသူတွေကို သင်မသိလိုက်ဘဲ သင့်ကို unfollow လုပ်ခိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။.
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ဒီလိုပါ။ : ငါဘာလို့ Instagram မှာ followers တွေဆုံးရှုံးရတာလဲ ? ဤမေးခွန်းအတွက် အဖြေပေးရန်, nous avons fourni ici les5raisons possibles pour lesquelles vous perdez une partie ou la plupart de vos followers sur Instagram.
1.	Instagram ပေါ်ရှိလူများသည် ပိုမိုရွေးချယ်လာကြသည်။
Instagram ဟာ အချိန်အတော်ကြာအောင် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ; သုံးစွဲသူဦးရေသည် နှစ်များတစ်လျှောက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို တိုးလာခဲ့သည်။, ထို့ကြောင့်, လူအများစုကသူတို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာသူတို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရသာတွေပြောင်းသွားတယ်.
၎င်းသည် အဟောင်း သို့မဟုတ် မသက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ပို့စ်တင်ခြင်းကြောင့် Instagram followers များ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။.
2.	မင်း Instagram မှာတင်ခဲတယ်, သို့မဟုတ် မကြာခဏ.
သင် Instagram တွင် Follower အရေအတွက်သည်တိုးလာသည်ထက်ပိုမြန်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလျှင်, သင်၏ ပို့စ်တင်ခြင်း၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို အပြစ်တင်နိုင်ပါသည်။.
မကြာခဏ မတင်ရင်, သင်၏စာရင်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတို့၏သတင်းဖိဒ်တွင် သင့်အကြောင်းအရာကို ဖတ်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ပါ။, အဲဒါတွေကသူတို့ကိုမင်းနောက်မလိုက်နိုင်တော့ဘူး. သို့သော်ငြားလည်း, မကြာခဏ ပို့စ်တင်ရင်, တစ်နေ့ခြောက်ကြိမ် (သို့) ထို့ထက်ပိုဆိုကြပါစို့, ပျင်းစရာကောင်းပြီး သင့်စာရင်းသွင်းသူများသည် သင့်နောက်ကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။.
၃.	First impression မသင့်တော်ပါ
ပထမအထင်အမြင်သည် အခြေခံကျသည်။, ထို့ကြောင့် မပျက်စီးစေရန် သတိထားပါ။ ! မည်သည့်နှုန်းထားဖြင့်, မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအပြင်, နောက်လိုက်အသစ်များကြည့်ရှုသည့် ပထမဆုံးအရာမှာ သင်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းဖြစ်သည်။, ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကိုးကားချက်များ သို့မဟုတ် ကိုးကားချက်များဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန် သေချာပါစေ။.
မင်းရဲ့သတင်းက ညစ်ပတ်နေရင်, အလွန်ကွဲပြားသောဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ, အရောင်များနှင့်အရိပ်များနှင့်ကွဲပြားသောပုံရိပ်အရည်အသွေး, အလားအလာရှိသော နောက်လိုက်များကို ပိတ်ရန် သင်အန္တရာယ်ရှိသည်။. သို့သော်ငြားလည်း, သင့်တွင် ထူးခြားသောအကြောင်းအရာနှင့် ကိုက်ညီသောဒြပ်စင်များရှိလျှင်, အချိန်တိုအတွင်း သင့်တွင် Follower များ သဘာဝအတိုင်း ရရှိလိမ့်မည်။. ဒါကြောင့် တသမတ်တည်းရှိနေချိန်မှာ အပျော်အပါးဖြစ်အောင်နေပါ။.
၅.	ငြီးငွေ့ဖွယ် သို့မဟုတ် နှစ်သက်ဖွယ်မရှိသော စာတန်းများ
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဓာတ်ပုံများသည် သင့်နောက်လိုက်များအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။, ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစာတန်းများသည်သင်၏စာဖတ်သူများ၏အာရုံကိုဖမ်းစားသည်. ထို့ကြောင့်, သင့်စာတန်းများသည် ငြီးငွေ့ဖွယ် သို့မဟုတ် ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါက၊, သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများသည်ပျင်းပြီးသင့်နောက်သို့လည်းမလိုက်နိုင်ပေ.
1.	လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ။
အပြောင်းအလဲက ရှောင်လွှဲလို့ မရဘူး။, အထူးသဖြင့် ဤဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာနှင့် Instagram တွင်ဖြစ်သည်။. ထို့ကြောင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသစ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ယူပါ၊ ၎င်းတို့အားသင်၏ချဉ်းကပ်ပုံတွင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပါ။. သင့်ဖိဒ်တွင် ခေတ်စားနေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးပြီး မျှဝေပါ။, နှင့် သင်သည် နောက်လိုက် အများအပြားကို ရရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။.
2.	မျှတပြီး ပုံမှန်အနေအထားရှိပါစေ။
သင့်ဖိဒ်တွင် အမြဲတင်နေသကဲ့သို့, သင့်နောက်လိုက်များသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကို စတင်လေ့လာပြီး ပိုမိုရင်းနှီးလာမည်ဖြစ်သည်။, အထူးသဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိလျှင်. ဒါကြောင့်, ဟန်ချက်ညီပြီး ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှု ရှိပါစေ။ de 1 à2posts par jour, သင်၏နောက်လိုက်အရေအတွက် တိုးလာလိမ့်မည်။.
၃.	အသိအမှတ်ပြုထားသော Profile
ရိုးရှင်းပါတယ်။ : သင်လိုအပ်သမျှသည် မျက်စိနှင့်ဖမ်းစားနိုင်သော အရည်အသွေးရှိသော ဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်။, သင့်ပရိုဖိုင်ရှိ ကိုးကားချက်များနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အရည်အချင်းများ. ဒီလိုမျိုး, မင်းနောက်လိုက်တဲ့သူတွေမင်းနောက်ကိုလိုက်ချင်လိမ့်မယ်.
၄.	သင့်အကြောင်းအရာတွင် တသမတ်တည်းနှင့် တိကျမှုရှိပါစေ။
အကြောင်းအရာပြောင်းခြင်းသည် မကြာခဏ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။. ထို့ကြောင့်, Instagram မှာ တင်တဲ့အခါ တိကျတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိတယ်။ ; အပြင်အဆင်တစ်ခုတည်းတွင်နေ၍ ဂိမ်းကိုကစားပါ။. သို့သော် သင်သည် ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်အကြောင်းအရာကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။, Valentine's Day နဲ့ တခြားသူတွေလိုပါပဲ။.
ပုံတစ်ပုံတည်းနဲ့ Follower စုဆောင်းဖို့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ; ဒဏ္ဍာရီလည်းလိုတယ်။. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော စာတန်းများ ပါရှိခြင်းသည် သင့်အကောင့်တွင် နောက်ထပ်နောက်လိုက်များကို ဆွဲဆောင်ပြီး ထားရှိရန် ကူညီပေးပါသည်။. ၎င်းသည်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်, ထို့ကြောင့် သင့်လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်နောက်လိုက်များ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို တိုးပွားစေမည့် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။.
Instagram Cheat Sheet တွင် Follower များပိုမိုရရှိအောင်နည်း : #Guide n° ၁
ယခင်ဆောင်းပါးFollowers မပါဘဲ Instagram တွင်ငွေရှာနည်း 2021 : ပြုလုပ်နည်း ၉
နောက်ဆောင်းပါးသင့် iPhone တွင် Instagram ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း :3နည်းလမ်းများနှင့် အသုံးချမှုများ